စနေည အတွက် တွေ့ ရှိမိသော ဘောပွဲ၂ပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စနေည အတွက် တွေ့ ရှိမိသော ဘောပွဲ၂ပွဲ
စနေည အတွက် တွေ့ ရှိမိသော ဘောပွဲ၂ပွဲ
Posted by မောင် ပေ on Feb 18, 2012 in Creative Writing, Hobbies & Games | 12 comments
၁၈.၂.၂၀၁၂ မနက်ခင်းပိုင်းတွင် ဖြစ်သည် ။ လေးစားခင်မင်ရသော အရာရှိဟောင်းတစ်ယောက်နှင့် ဖုန်းပြောဖြစ်ခဲ့သည် ။(အရာရှိဟောင်း ဟု သုံးရခြင်းမှာ သူငယ်ငယ်တုန်းက အလယ်တန်းကျောင်းသားဘဝ တွင် ကျောင်းလစ်သဖြင့် သူ့ အတန်းပိုင်ဆရာမ က တင်ပါးကို ကြိမ်ဖြင့်အရိုက်ခံ ထိထားသဖြင့် ၊ ကြိမ်ရာ ရှိနေသောကြောင့်ဟူ ၊ အီကား စကားချပ် ) အကြောင်းအရာစုံများစွာတွင် ဘောလုံးပွဲအကြောင်းများလည်း ပါပါသည် ။ ယနေ့ လက်ရှိ မော်ဒန်ဘောလုံးလောက၏ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိသည့် အကြောင်းအရာများကို ပြောဖြစ်ကြသည် ။ ကျွန်တော် ဂေဇက်တွင် ဘောလုံးအကြောင်းမရေးချင်တော့ ဟု ကျွန်တော်က ပြောသောအခါ ၊ ဆက်ရေးရန် သူက ပြောလာသည် ။ ကျွန်တော် က ကျွန်တော့် ခန့် မှန်းချက် အလွဲများအတွက် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စိတ်ညစ်ရသောကြောင့် မရေးဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသောအခါ ၊ သူကလဲ မှားသည်ဖြစ်စေ မှန်သည်ဖြစ်စေ ၊ ဖတ်စရာ တစ်ခုအဖြစ် သဘောထားရန်ဆိုလာသည် ။ ထို့ အတွက် ကျွန်တော် ပြန်ရေးပါသည် ။ ဆက်လက်ရေးပါမည် ။
ယနေ့ ဥရောပ ဘောလုံးကလပ်များတွင် သတိထားမိသည့် အရာတစ်ခုမှာ ၊ ဥပမာ အားဖြင့် ဘောလုံးကလပ်အသင်း တစ်သင်းသည် ၅ ပွဲ ဆက်တိုက်ရှုံးနေမည် ။ ထိုကလပ် ကို ၆ ပွဲ မြောက် ပွဲစဉ်တွင် သေချာပေါက် အနိုင်ပြန်ကန်မည် ဟု ဆိုကာ အားပေးလျှင် မအောင်တာ များသည် ။ 17.2.2012သောကြာည/စနေနံနက် တွင် ကစားသွားသော “ အင်တာမီလန် နှင့် ဘိုလော့နာ ” ပွဲတွင်ဆိုလျှင် ၊ အင်တာမီလန် အသင်းအနေအထားမှာ အားပေးချင်စရာ အရမ်းကောင်းနေသည် ။ ရှေ့ ငါးပွဲရလဒ်များမှာ ၄ ပွဲ ရှုံး ၊ ၁ ပွဲ သရေ ၊ အင်တာအိမ်ကွင်းတွင် ကစားရမည် ကို ဖွင့်လှစ်လာသော ဈေးကလဲ အင်တာမီလန် တစ်ကယ်ကန်မည့်ဈေးမျိုး ဖြစ်နေသည် ။ တစ်ဂိုးသွင်းလျှင် ၁၀%အရှုံး ၊ တစ်ကယ်ကန်ပြီးသွားတော့ အင်တာမီလန် က ဘိုလော့နာ ကို ၃ဂိုး ဂိုးမရှိဖြင့် ရှုံးသွားသည် ။ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်သင့်သော ရလဒ် ။
သို့ သော်လည်း ထို အင်တာမီလန် ကဲ့သို့ ၊ နောက်ဆုံးကန်ခဲ့သောငါးပွဲ နိုင်ပွဲမရှိသည့် အသင်းများသည် ပရိသတ်များအတွက် အားပေးချင်စရာ အမြဲကောင်း ဖြစ်နေမည် မှာ အမှန်ပင် ။
သည်ကနေ့ ၊ ၁၈.၂.၂၀၁၂ စနေ ည တွင် ကစားမည့် ပွဲများမှာ
7.00 ချဲဆီး – ဘာမင်ဂမ်
9.30 အဲဗာတန် – ဘလက်ပူး
9.30 နော့ဝစ် – လက်စတာ
9.30 မီဝေါ – ဘော်တန်
11.45 ဆန်းဒါးလန်း – အာဆင်နယ်
9.00 နုရင်ဘတ် – ကိုလုံး
9.00 ကိုင်ဇာစလော့တန် – ဂလာဘတ်
9.00 ဟာသာဘာလင် – ဒေါ့မန်
9.00 လေဗာကူဆင် – အော့ဘတ်
9.00 ဟမ်းဘတ် – ဝါဒါဘရီမင်
12.00 ဖရိုင်းဘတ် – ဘိုင်ယန်မြူးနစ်
2.15 ဂျူဗင်တပ် – ကာတားနီးယား
11.30 ဂီတာဖေး – အက်စ်ပန်ညို
1.30 ရီးရဲမက်ဒရစ် – ရေဆင်း
3.30 ဆီဗီလာ – အိုစာစူနာ
အထက်ပါ ပွဲစဉ်များထဲ မှ ၊ ပရိသတ်များအတွက် အားပေးရကျိုးနပ်နိုင်မည့် ပွဲ၂ ပွဲ ကို အသေးစိတ်ကြည့်ရာတွင်…
ရီးရဲမက်ဒရစ် (၁) – ရေဆင်း (၁၈)
ရီးရဲ လာလီဂါ ၂၂ ပွဲ ကန်အပြီး ၁၉ ပွဲ နိုင် ၊ ၁ ပွဲ သရေ ၊ ၂ ပွဲ ရှုံး ၊ ရဂိုး၇၅ ပေးဂိုး၂၁ ၅၈မှတ်
ရေဆင်း လာလီဂါ ၂၂ ပွဲ ကန်အပြီး ၄ ပွဲ နိုင် ၊ ၁၁ ပွဲ သရေ ၊ ၄ ပွဲ ရှုံး ၊ ရဂိုး၁၈ ပေးဂိုး၂၆ ၂၃မှတ်
ရီးရဲ အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ငါးပွဲမှာ နိုင် ၊ နိုင် ၊ နိုင် ၊ သရေ ၊ နိုင်
ရေဆင်း အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ငါးပွဲမှာ သရေ ၊ သရေ ၊ သရေ ၊ ရှုံး ၊ နိုင်
သည်နှစ်သင်း တွေ့ ဆုံခဲ့မှု များမှာ
21.9.2011 ရေဆင်း ၀-၀ ရီးရဲမက်ဒရစ်
6.3.2011 ရေဆင်း ၁-၃ ရီးရဲမက်ဒရစ်
23.10.2010 ရီးရဲမက်ဒရစ် ၆-၁ ရေဆင်း
4.4.2010 ရေဆင်း ၀-၂ ရီးရဲမက်ဒရစ်
21.11.2009 ရီးရဲမက်ဒရစ် ၁-၀ ရေဆင်း
ဈေးဖွင့်လှစ်မှု အရ ရီးရဲ သုံးဂိုးသွင်းလျှင် တစ်ဝက်ခန့် အမြတ်ရမည် ဖြစ်သည် ။
ရီးရဲ အနေအထားမှာ ဒုတိယနေရာမှ ဘာစီလိုနာ နှင့် ၁၀မှတ်ကွာနေပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် သည်နှစ် လာလီဂါချန်ပီယံ ဆုမှာ ရီးရဲရဖို့ ၈၀% သေချာနေပြီဖြစ်သည် ။
ရေဆင်း အနေအထားမှာ တန်းဆင်းဇုန် ၊ အောက်ဆုံးမှ ပြန်ရေလျှင် နံပါတ်၃ ၊ သည်ပွဲကို ရှုံးခဲ့လျှင် ၊ သူ့ အောက်အဆင့်က ဂီဂျွန်နိုင်ခဲ့လျှင် ရေဆင်းမှာ အဆင့်၁၉ သို့ ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး ၊ တန်းဆင်းရဖို့ ရာနှုန်းပိုများလာမည် ဖြစ်သည် ။
ရီးရဲမက်ဒရစ် သည်ပွဲကစားပြီး လာမည့် အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ညတွင် ချန်ပီယံလိဂ် ရှုံးထွက် ပွဲစဉ်အဖြစ် ၊ ရုရှားတွင် သွားကစားရမှာ ဖြစ်လို့ ၊ သည်ပွဲ တွင် ကစားသမား အင်အားခြွေတာလာနိုင်သည် ။
အနိုင်အရှုံးတွက်လျှင် ၊ ရီးရဲမက်ဒရစ်အိမ်ကွင်းတွင် ရီးရဲ အရံအင်အားဖြင့် ကစားခဲ့လျှင်တောင် ရေဆင်း လို အသင်းမျိုးကို အနိုင်ကစားနိုင်သည် ။ တစ်ဘက်တွင် တန်းဆင်းဇုန် မှ ရုန်းနေသည့် ရေဆင်း ၏ ရုန်းအား ကိုလည်း လျှော့မတွက်သင့်ဟု ထင်သည် ။
ထို့ ကြောင့် ယခုပွဲတွင် ၊ ရီးရဲ လုပ်ကစားနိုင်သည့် ရာနှုန်း ၅၀% ခန့် ရှိမည် ဟု ကောက်ချက်ချမိသည် ။ သရေ ကန်နိုင်သည် ဟု တွေးမိသည် ။ တစ်ကယ်လို့ သရေ မကန်ဘဲ အနိုင်ကန်ခဲ့တောင် ၊ ၁ ဂိုး ထဲ နဲ့ နိုင်လျှင် လျှင် ရီးရဲ ၃ မှတ် ရမှာ ဖြစ်သောကြောင့် ၊ ယခုပွဲ ကို ““ရေဆင်း”” နှင့် အားပေးလျှင် အမှားမများနိုင်ဟု ပြောချင်ပါသည် ။
ဂျူဗင်တပ် (၂) – ကာတားနီးယား (၁၄)
ဂျူဗင်တပ် စီးရီးအေ၂၂ပွဲကန်အပြီး ၁၂ပွဲနိုင် ၊ ၁၀ပွဲသရေ ၊ ၀ ရှုံး ၊ ရဂိုး၃၃ ပေးဂိုး၁၃ ၄၆မှတ်
ကာတားနီးယား စီးရီးအေ၂၁ပွဲကန်အပြီး ၆ပွဲနိုင် ၊ ၉ပွဲသရေ ၊ ၆ပွဲရှုံး ၊ ရဂိုး၂၇ ပေးဂိုး၂၉ ၂၇မှတ်
ဂျူဗင်တပ် အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ ငါးပွဲမှာ သရေ ၊ နိုင် ၊ သရေ ၊ နိုင် ၊ နိုင်
ကာတားနီးယား အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ ငါးပွဲမှာ နိုင် ၊ သရေ ၊ သရေ ၊ ရှုံး ၊ ရှုံး
25.9.2011 ကာတားနီးယား ၁-၁ ဂျူဗင်တပ်
23.4.2011 ဂျူဗင်တပ် ၂-၂ ကာတားနီးယား
13.1.2011 ဂျူဗင်တပ် ၂-၀ ကာတားနီးယား
5.12.2010 ကာတားနီးယား ၁-၃ ဂျူဗင်တပ်
2.5.2010 ကာတားနီးယား ၁-၁ ဂျူဗင်တပ်
ဈေးဖွင့်လှစ်မှု အနေအထားအရ ဂျူဗင်တပ် တစ်ဂိုးသွင်းလျှင် ၁၀၀%ဆုံးရှုံးမည် ။
သည်နှစ်သင်းအကြား တွင် အမှတ်ရစရာ အချက်မှာ ၊ ကာတားနီးယား စီးရီးအေ သို့ ပြန်တက်လာသည့် နှစ် ၂၀၀၆ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် ၊ ဂျူဗင်တပ်နှင့် တွေ့ ဆုံခဲ့သမျှ ၂ ပွဲ ဘဲ ရှုံး ခဲ့ဖူးသည် ။
ယခုလက်ရှိတွင် ဂျူဗင်တပ် မှာ ပြီးခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဟူးည က ပါးမားအိမ်ကွင်းတွင် ကြားရက်ပွဲစဉ် ကစားခဲ့ရသဖြင့် ၊ ကာတားနီးယား ကစားသမားများက ပိုလန်းဆန်းနိုင်သည် ။
ဂျူဗင်တပ် မှာ အဆင့်၂ သို့ ဆင်းပေးလိုက်ရပြီ ဖြစ်လို့ ၊ သည်ပွဲ ကို အနိုင်ကစားမည် မှာ သေချာသလောက်နီးပါးရှိသည် ။ ဂျူဗင်တပ် အနိုင်ကစားတာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ ၊ တစ်ဂိုး ထဲ နှင့် အနိုင်ကန်သွားခဲ့လျှင် ဂျူဗင်တပ် အားပေးသူများ ဆုံးရှုံးနစ်နာမည် ဖြစ်သည် ။
ကာတားနီးယား သည် ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေညတုန်းက ဂျီနိုအာလို ခြေတက်နေသည့် အသင်းမျိုး ကို ၄-၀ နှင့် အနိုင်ကန်ထားသည်အထိ ခြေတက်နေသည် ။ ကာတားနီးယား အနေဖြင့် အခုပွဲတွင် ကြွေ ပြန်ကျသင့်ပြီ ဟု တွက်လို့ ရနိုင်သော်လည်း ၊ ဂျူဗင်တပ် ၁-၀ ကာတားနီးယား ဆိုလျှင်တောင် ကာတားနီးယား ပရိသတ်များအတွက် အပြုံးမပျက်နိုင်သည့်အတွက် ၊ ယခုပွဲ ကို ကာတားနီးယား ပရိသတ် လုပ်တာ အမှန်ဆုံး ဖြစ်ပါမည် ။
ဂေဇက်တွင် ရေးချင်ရာရေးခွင့်ပေးသော အူးကိုင် နှင့် စိတ်ဓါတ်မကျရန် အားပေးတတ်သူ ကျွန်ုပ်ချစ်မိတ်ဆွေ အရာရှိဟောင်း အကိုကြီးအား အထူးလေးစားကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောချင်ပါသည် ။
…… အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် …….
ကာတားနီးယား ရယ် ရေတက်..အဲလေ..ရေဆင်းရယ်ပေါ့နော်.
ဘောသမား.ပုန်းချော်ဆိုတဲ့လူ .ဘယ်ဘောမရမှန်းမသိလို့ တိုင်ပတ်နေတာ
အူးလေးလို ဘောပင်တိုင်စံနဲ့ တွေ့ ပေးချင်နေတာ..
ဘောဘောချင်း ထပ်မြတ်တယ်ဆိုလားပဲမိုလို့ ..အဲလူကြီးကို ဘောတစ်လုံးလောက် ပေးမ လိုက်ပါနော်.
အို ပေး မ မ နိုင်ပေါင်ဗျာ ။ အဲ့မှာ လဲ ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ ။
သူ့ ကိုယ်သူ ငမူးဆိုပြီး ဝန်ခံထားတာ ။
မတော် သူ့ ပေးမလို့ ၊ လွတ်ကျနေမှဖြင့်
ဥမကွဲသိုက်မပျက် မဆိုနိုင်ဘဲ ဖြစ်သွားမယ်
ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘဲ အားပုံ လေး စား
မနေ့က တွေ့ရှိမိသော ဘော အကြောင်းတော့ ရေးတော့ဘူးလား ဘောဆရာကြီးပေ။
ရေဆင်း ရင်းစေလို့ အထက်ဆရာကြီးများက ပြောနေဒယ်။ ရေဆင်းဖက်က ထိုင်ပါ…
တဂျူဂျူနဲ့ဗင်တပ်ကြီး ချီလာတာကို နီးမှယားပြီး ကာတားလို့ ရပါ့မလားကွ…
ကာတားနီးယား ၀-၂ ဂျူဗင်တပ်
မမှားသော ရှေ့နေ (ရှိချင် ရှိမယ်)
မသေသော ဆေးဆရာ (ရှိချင် ရှိမယ် – ငြင်းဖို့ မစဉ်းစားနဲ့ ဆေးမကုရင် သေစရာ မရှိဘုးပေါ့)
အသည်းမကွဲဘူးသော ကဗျာဆရာ (ရှိတယ် ကိုနေ၀န်းနီ ကြီးက အသည်းမကွဲဘူးပါတဲ့၊ မယုံသူ့မေးကြည့်)
ငါးကြော်မကြိုက်တဲ့ ကြောင် (ရှိတယ် ကိုကြောင်ကြီးကိုမေးကြည့် ငါးကြော်လုံးဝမကြိုက်ဖူးတဲ့)
ဘောလုံးပွဲ မရှံးဘူးတဲ့ ဘောလုံးပွဲလောင်းတဲ့လူ ဆိုတာကတော့
လုံးဝ လုံးဝ ကြီးကို မရှိပါဘူး ခင်ဗျာ။
အသက် ၄၂ နှစ်မှာ ဖြတ်သန်းခဲ့တာတွေ များပြီလေဗျာ။
ညီငယ် မောင်ပေကို အပျော် ၀င်နောက်သွားပါတယ်ဗျာ။
ဟိုး အရင်တုန်းက ဘောပွဲတွေ လုံးဝ မကြိုက်ခဲ့ဘူး
နောက် ချဲဆီးကို မော်ရင်ဟို စရောက်ချိန် ဘော တွေ ကို နဲနဲ ကြည့်တတ်လာတယ်
ဘောတွေက လာတဲ့ အချိန် နောက်ကျလို့
အခုတော့ သူ့ဘောလဲ မကြည့်နိုင်တော့ပဲ…………
ကိုပေ ဆက်ရေးဗျ နာမည်ကြီး အားကစားဂျာနယ်တွေ က ကိုပေ့ကို သဘောကျလို့
သူခေါ်မယ် ငါခေါ်မယ် လု ရင်း ရန်ဖြစ်နေကြတယ်
ကိုပေ ဆက်ရေးနေမှ ဖြစ်မယ်နော
ဘောလုံးပွဲအကြောင်း ကို ဂေဇက်မှာဘဲ ရေးမယ်ဗျို့ 
ဂေဇက်မှာဘဲ ပျော်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
ကွန်မင့်ချီးမြှင့်ပေးတဲ့အတွက် အားလုံးကို လေးစားကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ရယ်ပါလေ
အေးလကွယ်…လူတွေက မောင်ပေခန့်မှန်းတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်လောင်းလည်း ရနေတာကို….အားမငယ်နဲ့… အမှားရှိမှ ပိုမှားတယ်။ ပိုမှားမှ မမှန်တော့မှာ….အမှန်ဆိုတာ မရှိတော့ရင်း မှားတော့ပါအုံးမလား….
ကိုပေ ငပလီလာမှာဆိုဗျ။KBZ မဟုတ်ရင်၊Air Mandalay ,Air Bagan!Myanmar Airways ကြိုက်ရာနဲ့ လာပါဗျ။
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ကြိုးစားပြီးလာပါ။ဧည့်ဝတ်ပြုပါရစေ။ကျနော်တတ်အားသရွေ့ အစွမ်းကုန်ကူမှာပေါ့။ဘီယာလေး
ကောင်းပါပြီ ဗျာ ။ ငပလီ ရောက်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ၊ မစ်စတာထွဋ် ဖုန်း ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါမယ် ။
ဟိတ် တိုးတိုး တိုးတိုး ကျိတ်ကျိတ် မလုပ်ကြနဲ့နော်
ကျနော်လဲ လာမလို့ အသံလေးပြုတော်မူကြဦး ၊
အာလူး အလာထူး ချင်တယ်ဗျာ …. ဒီဂနေ့ ည ။
ဟဲဟဲ ဖိုးအာလူးရေ ကနေ့ ညအပီသာဆော်ဗျ။